कसरी आईफोनमा सम्पर्कहरूको समूह बनाउने आईफोन समाचार
कसरी आईफोनमा सम्पर्कहरूको समूह बनाउने
एप्पलको बारेमा त्यस्ता चीजहरू छन् जुन बुझ्नै नसकिने हुन्छन्। तिनीहरू केहि सरल चीजहरू गर्नेको चिन्ता गर्छन्, कहिलेकाँही धेरै, र केहि आधारभूत विकल्पहरू थप गर्न बिर्सनुहुन्छ। यी आधारभूत विकल्पहरू मध्ये एक हो कसरी आईफोनमा सम्पर्कहरूको समूह बनाउने। IOS एजेन्डा एकदम पूर्ण छ र यसमा हामी फोटोहरू, वेब ठेगानाहरू, ईमेलहरू, सम्बन्धित व्यक्तिहरू र सामाजिक प्रोफाइलहरू थप्न सक्दछौं, तर समूहहरूको बारेमा के हुन्छ? यदि हामी साथीहरू, परिवार वा आईफोनबाट कुनै प्रकारको समूह सिर्जना गर्न चाहन्छौं भने हामी के गर्छौं?
ठीक छ, हामीसँग पूर्वनिर्धारित रूपमा भएका अनुप्रयोगहरूको साथ हामी सक्षम हुनेछैनौं। अब हामी आईफोन खोल्न सक्छौं, थिच्नुहोस् र सम्पर्कहरू समात्नुहोस्, समूहहरू, सिरीलाई सोध्नुहोस् वा जे हामी कल्पना गर्छौं, त्यहाँ समूह बनाउन कुनै तरिका हुँदैन। भाग्यवस, विकासकर्ताहरू माथि जान्छन् अनुप्रयोगहरू सबै प्रकारको अनुप्रयोग स्टोरमा, त्यसकारण हामीले केवल हामीले खोजेको एउटा खोजी गर्नुपर्नेछ (खोजीहरू जस्तै "सम्पर्क", "समूहहरू" वा समान) का साथ। म recommend सिफारिस गर्न जाँदैछु कि एउटा सित्तै संस्करण छ र यसले हामीलाई विज्ञापन ब्यानर हेरेर सम्पर्कहरू सिर्जना गर्न र ब्यवस्थापन गर्न अनुमति दिनेछ।
1 कसरी आईफोनमा सम्पर्कहरूको समूह बनाउने
1.1 सरल सम्पर्कहरूको साथ
सरल सम्पर्कहरूको साथ
सत्य यो हो कि यस प्रकारको अनुप्रयोगहरू धेरै सहज छन्। तिनीहरू कुनै पनि स्मार्टफोनको एजेन्डा जस्तै हुन्, तर प्रत्येक अनुप्रयोगको आफ्नै ईन्टरफेसको साथ। हामी निम्न कार्य गर्दछौं:
हामी मा खेले समूहहरू.
हामीले यसमा खेलेका थियौं प्लस प्रतीक (+)
हामी परिचय दिन्छौं nombre समूहको।
हामी मा खेले अर्को.
हामी सम्पर्कहरू चयन गर्दछौं जुन हामी नयाँ समूहमा राख्न चाहन्छौं।
हामी मा खेले बचत गर्नुहोस्.
अनुप्रयोग स्टोरमा धेरै अनुप्रयोगहरू छन् जुन हामीलाई आईफोनमा सम्पर्क समूहहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिनेछ, तर सरल सम्पर्कहरू मलाई सजिलो देखिन्छ। अन्य विकल्पहरू जुन तपाईलाई चासो लाग्न सक्छ ZXContacts oaसम्पर्कहरु। यदि, मेरो केस जस्तो तपाईसँग म्याक छ र जे होस् यसको आईफोनबाट सिधा सिर्जना गर्न केहि गर्न सक्तैन, उत्तम कुरा यो हो कि तपाईले ओएस एक्स सम्पर्क अनुप्रयोगको साथ सम्पर्क समूहहरू बनाउनु हुन्छ। र यदि होईन भने तपाई सँधै गर्न सक्नुहुनेछ। iCloud.com बाट समूह बनाउनुहोस्।
अनुप्रयोग अब एप्स स्टोरमा उपलब्ध छैन अनुप्रयोग अब अनुप्रयोग स्टोरमा उपलब्ध छैन
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » कसरी आईफोनमा सम्पर्कहरूको समूह बनाउने
ठिक हो, दुर्भाग्यवश आईफोनबाट तपाईले नेटिभ अनुप्रयोगको साथ समूहहरू व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्न, म एजेन्डा संगठित गर्न सक्षम भएँ iCloud.com र विशेष गरी aContacts + अनुप्रयोगलाई धन्यवाद, बर्षौंका लागि मेरो लागि आवश्यक।
आईसीएलउड.कटबाट सम्पर्क समूहहरू सिर्जना गर्न पनि सम्भव छ र यदि तपाईंले आफ्नो सम्पर्कहरू आइसीलाउडसँग सिnch्क्रोनाइज गर्न सेट गर्नुभयो भने सिर्जना गरिएका समूहहरू र सम्पर्कहरू एजेन्डामा देखा पर्दछ।
हामी सेप्टेम्बर on मा एप्पल कार्यक्रममा के हेर्नेछौं